के ट्रम्प चीनसँग व्यापार युद्ध चाहन्छन् ?
अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय व्यापार परिषद्का प्रमुख बनाउन चाहेका व्यक्ति पिटर नभारो को हुन् भनी चिन्नका लागि उनले बनाएको चलचित्र हेनुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा चीनले पु–याएको असरबारे उनले ‘डेथ बाइ चाइना’ नामक चलचित्र बनाएका थिए । त्यसको ट्रेलरमा उनले चीनका कारण अमेरिकामा ५५ लाख रोजगारी र ५७ हजार कारखाना गुमेको आँकडा पेश गरेका छन् ।
चलचित्रले चीनमाथि अमेरिकाको अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको अनि अमेरिकी बालबालिकालाई विषाक्त उत्पादन बेचेको आरोप लगाएको छ ।
एउटा बोल्ड दृश्यमा ‘मेड इन चाइना’ कुँदिएको एक चक्कुले अमेरिकाको मुटुमा चिरेको देखाइएको छ जसका कारण अमेरिकी झण्डामा रगतको धारो बगेको छ ।
नभारो नाटकीयता मन पराउने मान्छे देखिन्छन् । अनि उनका बोस डोनाल्ड ट्रम्प त नाटकबाज नै हुन् । नभारोलाई नियुक्त गरेर ट्रम्पले चीनसँग व्यापार युद्ध गर्न आफू नडराउने सन्देश विश्वलाई दिएका छन् । तर यो चलाखीपूर्ण देखावटी काम मात्र हुन सक्छ ।
सन् १९८७ मा निस्केको पुस्तक ‘दी आर्ट अफ द डील’ (सम्झौताको कला) मा चिनियाँहरूको बारेमा ट्रम्पले यस्तो लेखेका थिए : ‘विगत केही दशकयता मेलै चीनसम्बन्धी सयौं पुस्तक पढेको छु । मैले चिनियाँसँग मिलेर थुप्रो पैसा कमाएको छु । म चिनियाँको दिमाग बुझ्छु ।’
यसरी नभारोलाई नियुक्त गरेर ट्रम्पले चिनियाँहरूसँग थप राम्रो सम्झौता गर्न खोजेका हुन् ?
‘चीनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई लामो समयसम्म खेलाइरहेको छ,’ द कमिङ कोल्याप्स अफ चाइनाका लेखक गोर्डन चाङ बताउँछन् । ‘ट्रम्प त्यसलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । उनीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु भनेको आफूले चाहेमुताबिकको कुरा पाउनु हो अनि त्यही चिनियाँ दृष्टिकोण पनि हो ।’
चीनले अमेरिका जस्ता बजारमा स्टील जस्ता सस्ता पदार्थको बाढी ल्याएको आरोप लगाइएको छ । यसले सद्भावना बढाउने काम गर्दैन । तर ट्रम्पको टोलीले यसलाई अर्कै रूपमा प्रस्तुत गर्दैछ र चिनियाँहरूले त्यही दृष्टिकोण अपनाउँछन् भन्ने छैन ।
ट्रम्पको आगामी प्रशासन सम्हाल्ने टोलीले राष्ट्रिय व्यापार परिषद्को काम अमेरिकी उत्पादनलाई फेरि ‘महान्’ बनाउने हो भन्छ । यसो गर्दा अमेरिकामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने उसको विश्वास छ । व्यापार परिषद्को प्रमुखका रूपमा नभारोले अमेरिकाको व्यापार एजेन्डा तय गर्छन् र चीन तथा अन्य देशसँग अमेरिकाको व्यापार घाटा कम गर्ने नीति लिएर आउँछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर अर्थशास्त्रीहरूले अमेरिकी रोजगारी फिर्ता ल्याउने काम व्यावहारिक छैन भनेको अवस्थामा नभारोले के गर्न सक्लान् ?
‘ट्रम्प ‘चीनविरुद्ध कडा हुने’ योजना बुनिरहेका देखिन्छन् तर उनी गलत लडाईं लडिरहेका छन्,’ लामो समयदेखि चीन अध्ययन गरिरहेका फ्रेजर हावी भन्छन् । ‘रोजगारी बाहिरी देशमा जानु (आउटसोर्सिङ) अहिलेको लडाईं को मुद्दा होइन, अहिले त बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र बजारमा पहुँच मुख्य कुरा हो ।’
तर आमजनतालाई यो कुनैको मतलब छैन र ‘डेथ बाइ चाइना’ जसरी जनताको ध्यान यस्तो धारणाले आकर्षित गर्दैन ।
नभारोको तर्कको मूल आशय के हो भने विश्वव्यापीकरण (ग्लोबलाइजेसन) ले अमेरिकालाई भन्दा चीनलाई फाइदा पुगेको छ । उनी र उनीजस्तो विचार राख्ने अन्यले सन् २००१ मा चीनले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएयता अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिमा ह्रास आएको अनि चीनको चाहिँ प्रगति भएको विचार राख्छन् । यस्तो विचार राख्ने व्यक्तिको संख्या बढेको छ ।
‘नभारोको नियुक्ति राम्रो र सकारात्मक संकेत होइन,’ बेइजिङ विश्वविद्यालयमा फरेन स्टडिजका प्राध्यापक सीए ताओ भन्छन् ।
‘डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जित्दा चीनमा एकखाले उल्लास छाएको थियो र धेरै चिनियाँले उनी ह्वाइट हाउसमा हुनु भनेको अमेरिका–चीनका लागि राम्रो संकेत भएको भनी लेखेका थिए । तर विगतका केही हप्तामा यसमा पूरै परिवर्तन आएको छ ।’
‘नभारोको नियुक्ति बेइजिङलाई अनि ट्रम्पका मतदातालाई एउटा संकेत हो,’ प्राध्यापक सीएले भने । ‘चीनलाई व्यापारमा दण्डित गर्ने धेरै तरिका छन् । ट्रम्पले आफू यसमा गम्भीर रहेको र यसलाई गरिछाड्ने संकेत दिएका हुन् ।’
चीनले अमेरिकाको यो कटु व्यवहारलाई हलुका रूपमा लिनेछैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि आफ्ना जनतालाई खुशी राख्नुपर्नेछ । अनि ट्रम्पका पछिल्ला ट्वीटहरूले चिनियाँ जनतालाई धेरै चिढ्याएका छन् ।
‘एक महिनामा ह्वाइट हाउस सम्हाल्ने राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने व्यवहार ट्रम्पले देखाइरहेका छैनन्,’ चिनियाँ सरकारको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सको हालै प्रकाशित सम्पादकीयमा लेखिएको छ ।
‘उनीसँग अमेरिका जस्तो महाशक्तिलाई कसरी नेतृत्व दिने भन्ने ज्ञान छैन...उनले प्रशासन नसम्हालिसकेको भएर चीनले अहिलेसम्म उनका भड्काउ टिप्पणीलाई शान्त तरिकाले लिएको हो । तर प्रशासन सम्हाल्न थालेपछि पनि उनले चीनमाथि यस्तै व्यवहार देखाइरहे भने चीन चुप लागेर बस्दैन ।’
यो त लडाईंको आह्वान जस्तै सुनिन्छ । व्यापार युद्धका अभ्यास शुरु भइसकेका छन् ।
अनुवादक : विन्देश दहाल पुस ८, २०७३ मा प्रकाशित